ASUS RT-N12 VP ROUTER FIRMWARE - FIRMIN'NY FIARA SY FITAOVANA HAFA - 2019
Instagram dia iray amin'ireo tambajotra sosialy malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Izany toe-javatra izany dia mety tsy hisy fiantraikany amin'ny isan'ny mpampiasa mpampiasa hacking. Raha toa ka nisy nangalatra ny kaontinao dia tokony hanao fe-potoana tsotra hetsika izay ahafahanao miverina miditra ao izany ary misoroka fanandramana misimisy tsy nahazoana alalana.
Ny antony hanakanana ny kaonty dia mety ho hafa: tenimiafina tsotra, fampifandraisana amin'ny tambajotra Wi-Fi public, hetsika viraliny. Zavatra iray no zava-dehibe - mila manohy ny fidirana amin'ny pejinao ianao, miaro tanteraka ny kaontinao amin'ny olon-kafa.
Etap 1: Fanovana ny tenimiafina mailaka
Rehefa averinao manova ny fidirana amin'ny mombamomba anao, dia manoray ny hanova ny tenimiafinao mailaka voalohany, ary mandehana amin'ny kaontinao Instagram.
Mba hisorohana ny mety tsy hitrangan'ny pejy ho an'ny mpanafika intsony ny pejy, ilaina ny manova ny tenimiafina avy amin'ny mailaka izay misy ny kaonty Instagram voasoratra.
Ho an'ny tolotra mailaka samihafa, ity fomba fiasa ity dia miseho amin'ny fomba samihafa, fa amin'ny foto-kevitra iray ihany. Ohatra, amin'ny serivisy Mail.ru dia mila miditra amin'ny adiresy email sy ny tenimiafinao ianao.
Ao amin'ny zoro ambony ambony eo amin'ny varavarankely, tsindrio ny anaran'ny kaontinao mailaka ary mifidiana ny singa ao amin'ny sehatry ny kontext "Mail Settings".
Ao amin'ny rohy havia dia mandehana mankany amin'ny tablette "Fikarohana sy fiarovana"ary amin'ny ankavanana dia fidio ilay bokotra "Manova ny tenimiafina"ary midira ao amin'ny tenimiafina vaovao (ny halavany dia tokony ho karazany valo farafahakeliny, maniry ny manasokajy ny fanalahidy amin'ny rejisitra sy karazana hafa). Vonjeo ny fanovana.
Fanampin'izany, tianay ny manamarika fa saika ny alàlan'ny alàlan'ny mailaka rehetra dia ahafahanao manamarina ny fanamarinana roa marina. Ny maha-zava-dehibe azy dia ny miditra voalohany ny fampidirana sy ny tenimiao avy amin'ny mailakao, ary avy eo dia mila manamafy ny fanomezan-dàlana ianao amin'ny filazanao ny code verification izay handeha amin'ny laharan'ny finday.
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana toy izany dia mety hampitombo ny fiarovana ny kaonty. Miverimberina ao amin'ny sehatry ny fiarovana ny fampidinana azy. Ohatra, ao amin'ny Mail.ru, ity safidy ity dia hita ao amin'ny fizarana "Fikarohana sy fiarovana"izay nanatanterahantsika ny paikan'ny fanovana ny tenimiafina.
Raha tsy afaka miditra amin'ny mailaka ianao
Raha izany, raha tsy tafiditra ianao, na dia azonao antoka tanteraka ny fahamarinan'ny angon-drakitra voalaza, dia tokony hiahiahy ianao fa nahavita nanova ny tenimiafin'ny kaonty mailaka ireo mpitsikilo. Amin'ity tranga ity dia mila averinao indray ny fahafahana miditra ao amin'ny paositra amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny fizotran'ny fisintonana.
Eto indray, ity dingana ity dia hodinihina amin'ny ohatra amin'ny serivisy Mail.ru. Ao amin'ny fikandrana fanamafisam-peo dia mila tsindrio ny bokotra. "Tsarovy ny tenimiafinao".
Haverina any amin'ny pejy fanavaozana fidirana ianao, izay toerana ilainao hidirana ny adiresy mailaka hanohizana.
Miankina amin'ny tahirin-kevitra anananao, ianao dia mila manao ny iray amin'ireto:
Ampahafantaro ny fehezan-dalàna fanavaozana ny tenimiao voaray amin'ny nomeraon-telefaona
Ampidiro ny code fanavaozana ny tenimiafotra izay alefa amin'ny adiresy mailaka hafa;
Omeo ny valiny marina momba ireo fanontaniana momba ny filaminana.
Raha fantatrao amin'ny iray amin'ireo fomba ireo ny mombamomba anao, dia angatahana ianao hametraka tenimiafina vaovao amin'ny mailaka.
Etap 2: Recovery Password amin'ny Instagram
Ankehitriny fa ny kaonty mailaka dia voaaro amin'ny fomba mahomby, afaka manomboka mamerina indray ny fidirana amin'ny Instagram. Io fomba fanao io dia hamela anao hamerina ny tenimiafinao ary, manamarina asa fanampiny amin'ny alàlan'ny adiresy imailaka, mametraka vaovao.
Hitanisa ity pejy ity Ahoana ny famerenana ny tenimiafina ao amin'ny Instagram
Etap 3: Fifandraisana amin'ny fanohanana
Indrisy anefa fa ny endrika serafin'ny fifandraisana amin'ny tolotra fanohanana Instagram, izay azo alaina amin'ny alalan'ity rohy ity, dia tsy miasa androany. Noho izany, raha tsy afaka miditra ao amin'ny pejy Instagram ianao, dia tsy maintsy mitady fomba hafa fifandraisana amin'ny fanohanana ara-teknika.
Koa satria Instagram ankehitriny ny Instagram, afaka miezaka manatratra ny rariny amin'ny alàlan'ny fandefasana taratasy mitantara anao ny Instagram hacking amin'ny tranonkalan'ny tompony.
Mba hanaovana izany dia mandehana ao amin'ny pejy Facebook ary, raha ilaina, midira (raha tsy manana kaonty ianao dia mila misoratra izany).
Ao amin'ny faritra havanana amin'ny pejin'ny pejinao dia tsindrio ny sary miaraka amin'ny marika fanontaniana ary tsindrio ny bokotra ao amin'ny lisitra fidirana. "Milaza olana iray".
Ao amin'ny fikandran'ny pop up, kitiho ny bokotra. "Zavatra tsy miasa".
Mifidiana sokajy, ohatra, "Other", ary farito avy eo ny zava-manahirana anao amin'ny antsipiriany, fa aza hadino ny manondro fa manana olana momba ny Instagram ianao.
Rehefa afaka fotoana fohy dia hahazo valiny avy amin'ny fanohanana ara-teknika ianao ao amin'ny profil Facebook, izay hanazavana ny antsipirihan'ilay olana, na ianao haverina any amin'ny fizarana iray hafa ho an'ny fandefasana (raha toa ka miseho izany fotoana izany).
Tsara homarihina fa hanamafy ny fandraisanao anjara ao amin'ny kaonty ny fanohanana ara-teknika dia mety mitaky ireto manaraka ireto:
Sarin'ny pasipaoro (indraindray te-hanaonao amin'ny tarehinao);
Sary avy amin'ny sary nalefa tamin'ny Instagram (loharano loharano izay tsy mbola vita);
Raha misy, misy ny piknik ny mombamomba anao alohan'ny hacking;
Ny daty nahitana ny famoronana ny kaonty (ny marina kokoa, ny tsara kokoa).
Raha mamaly araka ny tokony ho izy ny fanontaniana marobe indrindra sy manome ny angon-drakitra rehetra ilaina ianao, dia mety hamerina ny kaontinao any aminao ny fanohanana ara-teknika.
Raha toa ka aorian'ny fanakanana, manandrana manavao ny kaontinao, dia mahita hafatra ianao "Tsy mety ny mpampiasa", mety manondro fa niova ny kaontinao, na nofafana ny kaontinao. Raha esorinao ny mety hisian'ny fanovana iray dia mety ho voafafa ny pejyo.
Mampalahelo fa tsy azo atao ny mamerina indray ny kaonty nofafana ao amin'ny Instagram, noho izany dia tsy misy zavatra hafa tokony hataonao afa-tsy ny fisoratana anarana vaovao iray ary hiarovana azy tsara.
Ahoana no hiarovanao ny tenanao amin'ny hacking Instagram profile
Ny fanarahan-dalàna amin'ny torohevitra tsotra dia hanampy amin'ny fiarovana ny kaontinao, fa tsy manome lamandy anao haka anao.
Ampiasao ny tenimiafina mafy. Ny tenimiafina tsara indrindra dia tokony ahitana tarehintsoratra valo farafaharatsiny, ampiasao ny litera amin'ny raharaha ambony sy ambany, tarehimarika sy marika.
Lisitry ny mpiserasera madio. Matetika, ny hacker dia anisan'ireo mpandray anjara tamin'ilay niharam-boina, ka raha madio dia zarao ny lisitry ny mpampiasa izay nisoratra anarana aminao ary nanaisotra ny kaonty mampiahiahy rehetra.
Hitanisa ity pejy ity Ahoana ny fomba tsy hanoratanao ny mpampiasa ao amin'ny Instagram
Afeno ny pejy. Araka ny asehon'ny fampiharana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia ny mombamomba ny misokatra izay misokatra misokatra. Mazava ho azy, ity safidy ity dia tsy mety amin'ny olon-drehetra, fa raha mitazona pejin'ny tena manokana ianao, mamoaka ny sarinao sy ny lahatsary avy amin'ny fiainana, dia tokony mbola hampihatra izany toe-piainana manokana izany foana ianao.
Aza tsindrio ny rohy mampiahiahy. Betsaka ny tranonkalan'ny tranonkala manintona ireo tambajotra sosialy malaza amin'ny aterineto. Ohatra, ianao tao amin'ny VK dia nahazo fangatahana avy amin'ny olon-tsy fantatra mba haka tahaka azy eo ambany saripika ao amin'ny Instagram miaraka amin'ny rohy mifandray.
Manaraka ny rohy ianao, aorian'izay dia maneho ny varavaran'ilay fidirana ao amin'ny Instagram ny efijery. Tsy misy zavatra tsy ampoizina, miditra ny fahazoan-dàlanao, ary ny solonanarana sy ny tenimiafinao dia alefa any amin'ny mpitsikilo.
Aza omena ny pejy raha misy fangatahana sy serivisy mampiahiahy. Misy fitaovana isan-karazany izay, ohatra, mamela anao hijery ireo vahiny ao amin'ny Instagram, manonofy avy hatrany ny mpanjifa, sns.
Raha tsy azonao antoka ny fiarovana ny fitaovana nampiasaina, dia midira ao amin'ny Instagram ny credentials ao aminy dia tsy mendrika izany mihitsy.
Aza mamela ny angon-drakitra momba ny fahazoan-dàlana amin'ny fitaovana hafa. Raha toa ianao ka miditra amin'ny ordinateran'ny hafa, dia aza tsindrio ilay bokotra. "Save Password" na ny toy izany. Rehefa vita ny asa, dia tazano ny mivoaka ny profil (na dia miditra amin'ny solosainan'ny namanao akaiky indrindra ianao).
Ampidiro ao amin'ny Facebook ny mombamomba anao Instagram. Hatramin'ny nanavotana an'i Instagram tao amin'ny Facebook, ireo tolotra roa ireo dia mifandray akaiky amin'izao fotoana izao.
Azonao atao ny manakana ny pejy tsy hacked, ny zava-dehibe dia ny manao asa haingana.